DVD e kere eke na-akpọ ya n'elu ọkpụkpọ nwere mbepụ Filiks agbakwunyere na onye ọrụ pụrụ iso na-results na-na akara na choro. The onye ọrụ nwere ọtụtụ ngwa na dị online ina ọrụ mere na ịke na iDVD bụ otu n'ime ha. Ọ bụ ezie na kwụsịrị omume a bụ ka dị maka download na bụ otu n'ime ihe ndị kasị mmasị omume nke ọrụ. A nkuzi bụ ihe niile banyere ihe ndị bụ isi nke usoro ihe omume na ndị kasị ọkaibe teknụzụ ndị na-na ebe na-enyere ndị ọrụ na DVD na-enwu.
Gịnị mere iDVD?
Ọ bụ ajụjụ kasị mkpa na ihe mere a onye ọrụ kwesịrị inwe a usoro ịrụ dị iche iche aga-eme. Azịza dị nnọọ mfe dị ka ọ kụziri site na ike nke Apple na elu teknụzụ na-eji aka ịzụlite omume na bụ ya mere ọ ukwuu tụrụ aro na-aga-eme nke DVD Burning rụrụ. Bụrụ na nke ọ bụla nke na nsogbu iDVD ka nwere ike-atụle n'elu Apple forums nke ga-ekwe ka onye ọrụ iji nweta ihe ahụ na na akara na chọrọ na iji nweta ihe mkpebi dịtụ mfe. The iDVD dịwo atụle n'isiokwu na ndị a forums ruru ka atụmatụ na ọrụ ndị na-ka ụtọ nke nkà na ụzụ na-eji.
Part 1: Download nri version n'ihi na gị mac
Download iDVD maka Snow agụ owuru
Mac OS X Snow agụ owuru nwere version 10.6 na ọ bụ 7th isi ntọhapụ nke Mac OS na e mere site Apple Inc adọta na rata ọzọ ọrụ n'ime azụmahịa. Nchikota iDVD na Mac version 10.6 bụ ndị kasị mma na ndị ọrụ na-ka nbudata na wụnye a mbepụ omume na kemgbe otu n'ime ndị ọkacha mmasị nke ọrụ. Ọ bụkwa otu n'ime-enweghị atụ na mbepụ omume na ga mpi ndị ọzọ version na ụdị na ga-ekwe ka onye ọrụ na-ewu a onu na bụ paramount na-eme ka DVD-ere ọkụ mfe karịa mgbe. N'okpuru ebe a bụ version nkọwa ndị a ga-atụle tupu pụta na-ruru na ụdị na klas:
The version na a na-akwado nke a Mac OS usoro bụ 7.1.2 mgbe ọ na-abịa iDVD.
Nke a version wuru na nkà na ụzụ ga-ekwe ka onye ọrụ iji na-enweta mbepụ slide na-egosi dị si iPhoto ihe ókè pụrụ ịdabere.
Faịlụ re-njikọ nke nwekwara e edozi mgbe ọ na-abịa a usoro nke na-egosi ya ịke na klas.
The CPU ojiji nwekwara e achịkwa na nke a version nke iDVD na ugbu a na ego na-eji na akara na ihe ndị a chọrọ nke usoro.
Nke a update bụ maka niile iDVD 7 ọrụ ka ha omume emelitere na klas na ịke.
Download iDVD maka Mountain Odum
Ọ nwere version nke 10,8 na ọ na-atụle ga-usen 9 isi ntọhapụ nke Apple na onye ọrụ ọkọkpọhi. Ọ bụ nnọọ otu n'ime ndị kasị oru oma na irè releases nke Apple Inc. na-eme ka a onye ọrụ na-eche na ha nzaghachi a na-ewere. Na-eso metụtara onu ọ na-gwara ibudata iDVD version na e kọwara n'ụzọ zuru ezu na ná nkebi a:
The version na a na-akwado nke a Mac OS bụ 7.1.2 na a na-ewere ka a mere n'ihi na nke a Mac version na ịṅụ niile mbipụta na-elekọta ma na-ezu okè.
Ọ bụ dakọtara na fọrọ nke nta niile Mac OS nsụgharị maka betterment nke onye ọrụ na-eme n'aka na a enweghị ntụpọ ahụmahụ bụ n'ebe na-akwado ọrụ.
The n'ozuzu ahụmahụ nke usoro ihe omume bụ pụtara na mkpokọta njikwa nwekwara mfe iso.
Ọ bụla layman ma ọ bụ novice onye ọrụ site na ihe ga-esi na ụdị na klas ikwe ya iji na-enweta pụta ka anya dị ka ihe omume a na ebudatara.
Download iDVD maka Maverick
N'ihi na ihe niile Maverick OS ọ na-atụ aro ka ibudata version 7.1.2 bụ na wụnye ya iji nweta ihe a chọrọ. Onye ọrụ kwesịrị ka e download mere si URL na e kwuru na a ngalaba na-agaghị nanị na-edu ha ka ọhụrụ OS ma onye ọrụ na-ọkọkpọhi a mmemme interface na a siri ike nkekọ na isi os.
Onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na version 7.1.2 ebudatara na arụnyere maka os.
Ọ bụ otu n'ime ndị na ụzọ ndị onye ọrụ ọkọkpọhi egwu results na àgwà na ịke.
The chọrọ, mkpa na-arụ ọrụ nke onye ọrụ na-akwado ezu site a usoro.
The interface bụ mfe iji na e nwere ọtụtụ otú eduzi nke pụrụ iduga onye ọrụ na-ziri ezi.
Nkebi nke 2: Olee otú iji wụnye iDVD
Iji nweta pụta ọ na-gwara na-eso usoro na a kọwara na nkà a nke nkuzi na-soro na ndị kasị mma n'ụzọ na-results enweghị ihe ọ bụla na-egbu oge na nke na-eme ka iDVD otu n'ime nhọrọ nke ọrụ na-ahọrọ na-aga na. Ọ ga-ekwe ka ndị ọrụ na-akawanye n'ozuzu nke kpebiri enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu ozugbo echichi e dechara na-arụ ọrụ mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Akụkụ kasị mkpa bụ iLife 9 ma ọ bụ 11 disk nke ga-agbanwe n'ozuzu onu:
The disk bụ-etinyere na onye ọrụ kwesịrị ka agụ Okwu Mmalite na yiri atụmatụ. The anọgide button a na-ahụ na-enwe:
The iDVD website a na-ahụ ka a bịa na na download button na-enwe n'ihu na ibudata na faịlụ ka chọrọ ọnọdụ:
Ozugbo ịzọpụta faịlụ a pịrị onye ọrụ mkpa agụ ntuziaka nwụnye na-agụ na zuru ma mee ihe n'elu mezue echichi na imecha usoro na zuru:
Nkebi nke 3: Alternatives maka iDVD on Mac
Wondershare Video Converter Ultimate Maka Mac bụ otu n'ime omume na-akawanye N'ihi n'ụzọ na-bụ egwu. Esonụ bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ nke usoro ihe omume ndị a ga-atụle.
The DVD akakabarede na-ere ọkụ bụ ngwa ngwa karịa iDVD na kenyere aga ruo ugboro 30 dị ka ngwa ngwa dị ka ndị ọzọ omume.
2Onye n'ozuzu DVD ahụmahụ e weere dị ka top notch na ọ na-gwara ibudata Wondershare Video Converter Ultimate for Mac si ukara website.
Usoro ihe omume na-abịa na a convertor na ike fọrọ nke nta tọghata ọ bụla usoro onye ọrụ nwere ike na-eche nke.
The n'ozuzu metụtara ndị iDVD na-kpebiri Ozugbo a na omume na-ibudatara na arụnyere na n'elu igwe.
Usoro ihe omume na-akwado n'elu 150 formats maka akakabarede na onye ọrụ nwere ike fọrọ nke nta tọghata ọ bụla usoro ọ bụla ọzọ na-enweghị nsogbu ọ bụla.
> Resource> DVD> 3 ihe nke iDVD download on Mac i nwere mara